Xadgudubka Kenya iyo xasuuqa umadda! – Bashiir M. Xersi
Kob walba kaliila ayaa dhacaysa, kaar iyo aadaar ayaa dhan walba is haysta, kur go’an, kalxan jaban, kab shiilan, kor dubmay, kub kala fallimay, kabiir iyo saqiir haaraamaya, duqanyn Kudhaa iyo Hoosingow, kaliya mahee, gobolladaa oo dhan Kobrooyin ayaa dul heehaabaya, kor iyo garba siman u duqeynaysa, degmooyinka xadka kulaala waaba la mariyey, kumanaan ayaa isaga qaxay, kaniini iyo dawo la’aani ku dhacday, kadinta oo biya dhex ceegaagan awgeed, kadeed aan dhammaanayn!
Duqayntii ugu xumayd waxay ka dhacday magaalada Hosingow, magaaladaa waxa ka dhacay waaxasuuq, magac kale uma hayo Anigu, waxaa la duqeeyey dad rayid ah, oo aan dagaal iyo dirir midna ku jirin, loona gaystay gumaad ka dhan ah nolosha Aadanaha, Jaziiradda Kudhaa iyana waa la faarujiyey, oo dadkii ka qexeen, ka dib markii duqaynta kala go’i weysay, taa kaliya ma ahan, maalin dhaweed ciidan Kenyan ah waxay galeen xerada Ifo iyo Xagardheer, kana gaysteen dhac iyo xadgudubyo foolxun.
Previous Previous post: Xasuuqa dhacaya yaa xilkiisa leh?!
Next Next post: Doqon diran iyo daacad dabran!
One thought on “Xadgudubka Kenya iyo xasuuqa umadda!”